कोरोना जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै कक्षा १२ को परीक्षाबारे राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गर्यो यस्तो निर्णय ! – Media News Khabar
कोरोना जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै कक्षा १२ को परीक्षाबारे राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गर्यो यस्तो निर्णय !
medianewskhabaar // काठमान्डौ। साउन ३१ गतेदेखि सञ्चालन हुन लागेको १२ को परीक्षाबारे विद्यार्थीलाई सहज हुने निर्णय गरिएको छ । विद्याथीहरुको सहजताका लागि कक्षा १२ को परीक्षा होम सेन्टरबाटै हुने भएको हो ।
कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिमलाई ख्याल गरेर यस पटक होमसेन्टरबाटै परीक्षा लिने तय भएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गा अर्यालले जानकारी दिए ।
कोरोना भाइरस महामारीका कारण कक्षा १२ को परीक्षा यसअघि रोकिएको थियो। जेठ अन्तिम सातादेखि गर्ने तय भएको परीक्षा दुई महिनापछि लिन लागिएको हो। कक्षा १२ मा परीक्षाका लागि झन्डै चार लाख विद्यार्थीले परीक्षा फारम भरेका छन्।
साउन ३१ गतेदेखि सञ्चालन हुन लागेको १२ को परीक्षाबारे विद्यार्थीलाई सहज हुने निर्णय गरिएको छ । विद्याथीहरुको सहजताका लागि कक्षा १२ को परीक्षा होम सेन्टरबाटै हुने भएको हो ।
Previous माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई यसरि फसाइयो !
Next साउन १५ गते शुक्रबार, हेर्नुहोस् तपाईंको राशिफल